Wariye Cawke oo galabta lagu aasay Magaalada Wajaale – STAR FM SOMALIA
Allaha u naxariistee Wariye Axmed Xasan Cawke, ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta aas ballaaran loogu sameeyay Magaalada Wajaale, oo dhacda xuduuda.
Aaska Wariyaha, ayaa waxaa ka qaybgalay boqolaal qof, oo ay ku jiraan Suxufiyiin, Fanaaniin iyo Masuuliyiin ka kala socotay Somaliland iyo Dowlad Deegaanka Somalida Itoobiya.
Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka tacsiyadeeyay geerida naxdinta leh eek u timid Wariyaha weyn, ee aroornimadii hore ee saakay ku geeriyooday Magaalada Jigjiga.
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray dhammaan intii uu ka baxay Wariyaha rug-cadaaga ah, ee tobonaanka sano Saxaafadda ku soo jiray.
Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Somalida Itoobiya, ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Suxufiga Somaliyeed.
Cawke, ayaa ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho, BBC, VOA iyo Telefishinka Caalamiga ah ee Universal. Allaha u naxariisto Wariye Cawke.